I-Brezza Marina Holiday House - I-Airbnb
I-Brezza Marina Holiday House
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Antonino
Ifulethi elisha nelikhanya kakhulu, elitholakala imizuzu emi-2 ukusuka olwandle lwaseSanta Tecla. Itholakala kumakhilomitha ayi-6 ukusuka enkabeni ye-Acireale, amakhilomitha angama-20 ukusuka eCatania, amakhilomitha angama-37 ukusuka eTaormina ethokozisayo kanye nama-35 ukusuka eGiardini Naxos. I-Holiday Apartment iBrezza Marina inikezela ngendawo yokuhlala yokuziphekela. Ifulethi lifakwe ngesitayela sesimanje futhi linekhishi elihlome kahle kanye negceke. Akukho ukushoda kwezinsiza ezifana ne-air conditioning, i-TV ne-Wi-Fi yamahhala ehhotela lonke.
NGAPHANDLE: Uzothola igceke elilula kakhulu, elihlanganyelwe phakathi nezinyanga zasehlobo, kodwa lihlukene futhi lihlotshiswe ngezitshalo nezimbali, lapho ungajabulela khona ukupholisa nokuphumula okufanele.
NGAPHAKATHI: Indawo yokungena isetshenziswa njengegumbi elivamile / lokuphumula elisetshenziswa njengombhede wesivakashi sesi-5, noma ngabe intsha noma izingane.
Ekhishini ifakwe konke okudingayo ukuze ukudla kwakho okuthandayo, zikhona 4 izitofu, kuhhavini futhi ifriji, uzophinde abe amabhodwe, saucepans, amahalavu, ladles, amapuleti, Cutlery, izibuko, izinkomishi, blender, juicer kanye ibhodwe lekhofi.
Kwenhlanzeko ngikunikeza amashidi, isethi yamathawula okugeza, i-toilet paper kanye nensipho.
Itholakala enyakatho-mpumalanga ye-Acireale futhi ilele ngaphansi kwe-Timpa falconiera, i-Santa Tecla iyindawo egudle ulwandle nendawo yokuhlala, lapho ungajabulela khona ukuphumula okufanele ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Idolobha elakhiwe abafuduki abancane besuka endaweni beya eningizimu, namuhla ukwakheka kwedolobha kufana namadolobha aseSicily angenkathi ephakathi, amaphakathi nogu lwaseSicilian lwase-Ionian.
I-Acireale yaziwa ngeCarnival yayo (I-Carnival Enhle Kakhulu eSicily) nange-Baroque yayo ebabazekayo (Ebizwa ngokuthi Idolobha Lamakhulu Amakhulu).
UMasipala wakhiwe endaweni eyithafa endaweni enemvelaphi yodaka lodaka, ebizwa ngokuthi i-Timpa, enamamitha angu-161 ukuphakama, ibeka cishe phezu koLwandle i-Ionian. Ugu, lapho kukhona amadolobhana amaningana, lubonakala ngamawa omsuka we-lava. Kukhona ingcebo ethile yemithombo yamanzi kanye nohlaza futhi indawo ezungezile iyalinywa, ikakhulukazi ngezithelo ezisawolintshi. Itholakala eRiviera dei Ciclopi, oLwandle i-Ionian, empumalanga yeSicily, emithambekeni eseningizimu yeNtaba i-Etna.
Uma ufika esikhungweni ngizobe ngikhona noma umuntu engimethembayo ozokwamukela.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho ngizotholakala nganoma yiluphi ulwazi nesidingo nganoma yisiphi isikhathi.